SEENAA GABAABDUU YUUSUF SHEEKH-DOON |
Abbaa Urjii tiin, Hagayya 25, 2018
Hegereen bilisummaa tan arra guutuu Oromiyaa keessaa hanga’aa jirtu, yaroo takkatti, sadrkaa gara-garaaatti, billiqa afuufan dhaamtu turte. Amna dukkanaa, dheertuu, shakkisiisftuu, san keeysatti, warri yaroo adda-addaatti, fiixa bahuu isii mamanii abdii irraa kutatan, kanneen mooraa qabsaawonni keessa baasanitti deebi’anii, fii, warri gananii bobaa diinaa jala seenan hedduu dha. Akkasumaa waliin, fedhiin diinaa tan billiqa san dhaamsuu, qabsaawota jibir, kanneen haala rakkisaa san keeysaan iftiina arraa arkaa turaniin, daddeebi’ee, irra aanamuu dandayee jira. Warra arkii san jeeynummaa hoonga hin qabneen faayanii, wareegama lubbuu isaanii tiin, billiqa saniif gaaza tahan keessaa tokko Yuusuf Sheekh-Dooni.
Yuusuf abbaa isaa Sheekh-Doon Alii fii haadha isaa Faaxumaa Muummad irraa toora bara 1952-aa, Baha Oromiyaa, Godinaa Afran Qalloo, ona Oborraa, magaalaa Deder, Ganda Gorgaaddatti beekkame, kan mana barnoota Aberraa Gizaaw (maqaa Dur) bira jirutti nama dhalate.
Yuusuf barnoota ammayyaa kan hamma hulaa saddeetii, mana barnootaa kanuma ganda isaanii bira jirutti akka xumureen, barbaada kan Sadarkaa lamadaa tiif, toora bara 1966, qe’eerraa fagaatee, Biyyoo Adaree dhaqe. Adaretti, Mana Barnoota Medhaane’elemitti, barnoota hulaa kudha lamaa bara 1970-tti xumuree, caalaa itti fufuuf, Shaggar bahe. Achitti, bara 1974, University Addis Ababaa (Finfinnee)-rraa Qu’ata Diinaggee (Economics)-tiin eeybifame. Xumura barnootaa booda, barbaanni hujii, Tajaajila Misooma Ooyruu kan Cilaalootti (Ye Cilaaloo Irshaa Limaat) mindeeysee, biyya Arsii geeyse.
Akka Yuusuf Cilaaloo keessatti jireenyaan wal fudhachutti seeneen, qabsoon, baroota hedduunf, diddaa bulchiinsa mootummaa Hayle Sillaaseerratti gaggeeyfamaa turte mooticha sireerraa fonqolchitee, tan Dargii tiin bakka buute. Dargiin, aangoo bulchiinsa ol-aanaa dooginyootarraa laqaaqee akka fudhateen, caasaa bulchiinsaa tan duraanii diigee tan isaa tiin bakka buusuu jalqabe. Haala kanaaf, barbaanni gaggeeysaa bulchiinsa Aanaa Oborraa, Yuusuf Sheekh-Doon, ilma qe’ee kan barnoota ammayaa tiin faayamee fii Dargii walitti fide.
Hawaasa qe’ee itti dhalatee guddate jiran tajaajiluuf carraa arkachuun, Yuusuf, haalaan gammachiise. Kanaaf, gaafa warri Dargii yaada muudama kanaa tiif itti dhihaatan, gaaficha qoma bantee fudhate. Akkasiin bara 1977, ji’a Bitooteessaa, muudama bulchiinsa Aanaa Oborraa fudhatee, karoora ummata magaalaa fii baadiyyaa dammaysuu fii gurmeeysuu tiin, halkanii fii guyyaa, hifaata malee, bobbatti seene.
Walakkaan bara 1977-aa, kan Yuusuf hawaasa magaalaa fii baadiyyaa Aanaa Oborraa tajaajiluuf marxifate, yaroo, sossoohinsi qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa, toora sanitti, hidda hidhate ture. Dhufiinsa isaa dura, hidda godhachuu qabsoo hanqisuu fii mancaasuuf gama bakka bu’oota Dargii tiin, ijibaanni godhamanii fii, tarkaanfiileen haala kanaaf fudhataman hedduu dha. Ijibbaata kanaaf shororkaaleen mootumaan gaggeeyfaman, naannoo sanitti, girgirii abaluu fii abaluutti moggaafanii jiru. Girgiriin haala kanaaf, duraa tan Balaachoo ja’amti. Balaachoon yaroo hamma takkaaf, itti gaafatamaa Hizb-dirijjitii naannoo sanii ti ture. Yaroo san, aangoo isaa tan daangaa hin qabnetti dhimma bahuun, Oromoota naannoo sanii kanneen sab-boonummaa qaban je’ee shakku hunda hidhatti guure. Isaanii fii sab-boonummaa adda baasuuf, mana hidhaa keessatti uleen araraase.
Balaa Balaachoo booda, tan nama Radi’eet ja’amuu tu arkame. Girgiriin Radi’eet, tan Balaachoo bilaash goote. Magaalaa Deder bira tartee, Oborraa hunda shororkeessite. Ilmi Asfaaw, Radi’eet, Ganda Aadam Daadhiitti namoota kudha torba dirretti gate. Burqaatti Maammad Zakuurii fii Shamshuu Usmaan Birqee ummata walgayiif yaamaman duratti ajjeese. Baddaa Qoree, Cubbotti, kaa’imman shaggooyyee taphachaa jiran galaafate.
Ummanni Oborraa, kan shororkaa armaa olii tiin wal fudhatan. ilma isaanii Yuusuf, akka kan Rabbi biraa ergameefitti fudhatan. Kanaa fiis, xiqqaa fii guddaan gammachuu harka samitti ol qaban. Dhufiinsi Yuusuf ummata bira dabree, wal’aansoo bilisummaa tiif xaa’oo tahe. Kuni, agarsiis aadaa kan qophii baazaaraa irratti dhihaateen ifa if godhe. Gaafana, warri miseensota hawwisoo tahanii qophii tanarraa qooda fudhatan, dooyaa agarsiisaarratti bahanii, daawwiin, dhiichisaan, hellee fii geeraaan onnee Oromootaa danfisanii tan diinaa raasan.
Yaassin Booranaa, Rabbi rahmata haa godhuufii, ummata dirree kubbaa magaalaa sanii guutan duratti gadi bahee, geerara qoma keessaa maddu, goomara sagalee leencaa bilaasha gootuun dabaalaa,
Mataa qoomee goggoysaa
Bilisummaaf dhiiga buusaa
Bineensa ooyruu fixe irraa guuysaa
Aduun dhiitee galgalaa
Loon galee Mistjaabaa
Aduun dhiite hin deebituu
Nafxanyaaf tanaan himaa.” je’e.
Isa malees, Abdi Yuun, wallisaan hawwisa Caffee Gadaa, billawa tojorraa kan mudhitti hidhate, galkaa keeysaa luqqisee, lulaa,
“Qara billawni koo gamni lachuu
Kaniin diina kiyyaan halaalchuu
Maalayyaa isaaniin wal fakkaachuu
Nuti hin feeenu waliin jiraachuu.”
jechuun, fedhii ummanni eega gaafa lola Calanqoo garaa qaban, tani ol baasuun rakkaa turte, dooyarratti lallabee, garaa qabbaneeyse.
Qophii gaafasiirratti, dhaamsa gama hawwisoo tiin dabran biratti, Yuusuf Sheekh Doon, haasawa seena-qabeeysa qoma ummataa fudhate dubbatee, akkuma aadaa isaatti, “adawwiin ummata bal’aa shishim!” jachuun dhaadatee, dhaadachiise.
Qophii tana booda, odoo hin turin, qabsaawotaa waliin hidhata qabdaan Yuusuf Sheekh-Doon qabamee, mana hidhaa Biyyoo Adareetti darbame. Isa waliiniis, obboleeysa, hoogganoonni waldayoota qotee buloota naannoo sanii tii fii, barattoonni kittillayyoonni Dargii quba itti laatan marti guuramanii Biyyoo Adaree geeyfaman. Xiqqo booda, Yuusufii fii warra waliin qaban keeysaa, obboleeysa isaa Mahammad Sheekh-Doon, hojjataa waajjira bunaa; Alii Mikaa’el, daldalataa; Bakhrii Daminaa, barreessaa waajjira bulchaa Aanaa; Abdullaa Aammad Sheekhaa, hoogganaa qotee buloota waldaya naannawa Kiyyoo; Abdallaa Sulee, hoogganaa qotee buloota waldaya 14-ii fii, barattoota keeysaa Abraahim Abuubaker (Dibbee); Yuusuf Aammad Baddannoo tii fii Toowfiiq Daawid, odoo mana heeraa hin geeyfamin, ajaja Koloneel Zallaqaa tiin, halkan, ji’a Sadaasaa, kan bara 1978-ii keeysa, mana hidhaa tii fuudhanii wareegan.
Ajjeechaa qofatti quufuu dadhabanii, reefka isaanii ummata daawwachiisuuf, magaalaa itti dhalatanii guddatan keessa facaasuu murteeyfatan. Kanaa fiis, kan Yuusuf Faras Magaalaatti, kan Bakhrii dukkaana Aammad Haadii duratti; kan Alii Mikaa’el seennaa Faras Magaalaa, mana adaadaa isaa duratti; kan Abdallaa Sulee magaalaa Jimaatti; kan Abdallaa Aammad magaalaa aananiitti dirree afan. Warra Deder malees, kanneen naannawaa tiin doorsisuuf, reefka Abraahim magaalaa Calanqotti, kan Mahammad Sheekh Doon Magaalaa Qobbootti, kan Yuusuf Aammad Baddannoo seennaa magaalaa Qobboo, iddoo Bikkiyyee ja’amtutti afanii, guyyaa guutuu ummata daawwachiisaa oolanii, galgala, reeyfa bokoke, boolla naannoo Mishini-tti qotaniifitti walirratti haranii, biyyee irratti deebisan.
Gocha farra mirga namoomaa kana bira kutanii, Sheekh-Doon, jaarsa ilmaan lama irraa ajjeesan, hidhatti darban. “Abbaa shiftootaa” ja’anii, haluu malee cafaqanii, yaroo tumiinsi lubbuu keessaa baasuu bira gaye, alatti darban. Sheekh-Doon, Rabbi rahmata haa godhuu fii, illaa tumaa jaraa tiin adunyaarraa galuu mudate.
Abbaan Yuusf, Sheekh-Doon, nama biyya Soomaaletti dhalate. Biyyaa fii sabaaf Soomaaleerraa haa tahu malee, akka hireen naannoo san fiddeen, hawaasaan wal seenee, aadaa fii hoodaan wal fudhatee, fuudhee, lammoomee, Oromoo caalaa kan Oromoof anaannatu tahe.
Sheekh-Doon, ilmii sheekhummaa isa muudde biratti, nama mukni kamtu maaliif qorichaa irratti qarooma cimaa qabu. Kanaaf jecha, rakkataan kadhaa Rabbii tiif, dhibamaan qorichaaf, fardaa fii lafaan nama barbaadan ture. Sanirratti Sheekhni, nama goofataa dha. Haala kanaaf seenaa irraa odeeyfaman heddu qaba. Isaan keessaa takka, tan namicha wal’aansaaf manatti isa yaame tokkoo ti. Namichi, Sheek-Doon dura, nama wal’aanaasa beekaaf manatti fide tokkorraa milkii dhabnaan tumee manarraa arhuu tu himama. Sheek-Doon kan oduu tana dhagaye, akka mana namichaatti jimaa qamahee mirqaaneen, abbaa manaa tiin, “amma mirqaannee, wal’aansaa fii ulee keessaa tokko filadhu. Ani hundaa fuu qophii dha.” je’ee, bordoo khaliixaa keeysaa gadi baasee namicha agarsiise ja’ama.
Sheekh-Doon, kan haala olii kanaan, hawaasa keessatti hin dhalatinii fii irraa hin tahin aammatee dagaage, diinni badii takkaan alatti, abdiin adda baasee, ilmaan hara itti baafachuuf dhalee guddifate waliin, galaafate. Isaa fii ilmaaniis haa galaafatu malee, hawwii fii fedhii isaanii, garuu, waliin biyyee uwwisuu hin dandeenye. Arra, wal’aansoon isaan galaafatamaniif, sadarkaa fiixa bahiinsi isii mama hin qabne bira geeysee jirti.
Galanni isaanii bilisummaa haa tahu!
Previous articleHubachiisa Koree Simannaa fi Deggarsa ABO Irraa Kenname
Next articleBorana, Garba and Garrii Unity – The wider impact of FDG